UJessica Chastain ku-Talks to Star ku 'It: Isahluko Sesibili' - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UJessica Chastain ku-Talks to Star ku 'It: Isahluko Sesibili'
UJessica Chastain ku-Talks to Star ku 'It: Isahluko Sesibili'
by UKelly McNeely February 20, 2018
ebhalwe ngu UKelly McNeely February 20, 2018
Njengoba kubikiwe Okunhlobonhlobo, oqokwe amahlandla amabili ku-Oscar uJessica Chastain usezingxoxweni zokuhola phambili ku-Andy Muschietti It: Isahluko Sesibili njengoBeverley Marsh osekhulile.
Noma okwamanje akukho okusayiniwe noma okusethwe ngamatshe, lokhu kuphawula isimemezelo sokuqala (semi) sokuqala sezinhlobo zabantu abadala beLoser's Club. Imithombo ka-Variety ithi "zombili izinhlangothi seziqale ngokusemthethweni ukuxoxa [noChastain] ngokuza kulo msebenzi".
Abalingisi abangaba khona bezinhlamvu zabantu abadala kube yisihloko esishisayo sengxoxo phakathi kwabalandeli abesabekayo kusukela impumelelo yasendle ye- ItUkukhishwa kokuqala.
Singathanda kubike ngaphambilini ukuthi uChastain wayebheke indima futhi abalandeli kubonakala sengathi bayawusekela lo mbono - kunenqwaba yamaphosta enziwe ngabalandeli abemphonse njengoTev. Uma ubheka iqiniso lokuthi umlingisi onethalente uke wasebenza phambilini noMuschietti ngawo-2013 Mama - kukhiqizwe nguGuillermo Del Toro - kunengqondo ukuthi abe ngumqhudelwano ophezulu.
Mama nge-Universal Pictures
UMuschietti ubuyela ukuqondisa It: Isahluko Sesibili nombhali uGary Dauberman. Lapho inguqulo yefilimu ye- It yaqala ukucatshangelwa, lencwadi yaguqulelwa kwiskripthi sikaDavid Kajganich. UCary Fukunaga (Detective True Isizini 1, aka isizini eyodwa enhle kunazo zonke ye-TV eyake yalwa nami) kamuva yahlelwa ukuba iqondise futhi ibhale kabusha iskripthi ngeChase Palmer. Ngemuva kokuthi uFukunaga ehambile futhi iphrojekthi yathathwa nguMuschietti, uDauberman walethwa ukusiza ukubhala kabusha iskripthi esilingana nombono kaMuschietti uma ifilimu.
Umbhalo we It: Isahluko Sesibili isasebenza futhi isethwe ukuqala kokuqopha ngaleli hlobo.
Futhi, asinazo izindaba ezisayiniwe ngokusemthethweni (yize kuphephile ukucabanga ukuthi sizobona ukubuya koMthethosivivinywa Skarsgård njengePennywise). Ngakho-ke, ngalesi sikhathi, kufanele uhlale ungabaza noma yimaphi amaphosta okusakaza owabona njengoba kungenzeka enziwe fan.
Njengenjwayelo, kuze kuqinisekiswe imininingwane, thatha konke nohlamvu lukasawoti.
Impela fan yenziwe
Uma kushiwo lokho, njengoba izindaba zifika, sizoqiniseka ukuthi sikuthumela! It: Isahluko Sesibili ihlelelwe ukukhishwa ngoSepthemba 6, 2019.
U-Andy MuschiettiITIt: Isahluko SesibiliJessica Chastain
'Indlu Yokufa' Ihlehliselwe Emuva Ngenxa Yombono 'We-Black Panther'
Lolu suku Emlandweni Owesabekayo: Februwari 20